Mendrika ho andro tsy iasana ve ny 29 marsa?
2008-04-09 @ 08:59 in Politika
Manamarika dieny mialoha aho fa hanafintohina olona maro ity lahatsoratra manaraka ity. Noho izany dia mampitandrina ny be sy ny maro avy hatrany aho tsy handray an-tendrony izay voasoratra eto. Nosoratana izy ity, hiteraka adihevitra araka ny iheverako azy, nefa anairana indrindra indrindra antsika rehetra handinika tokoa io vanim-potoana iray amin’ny tantara io. Fanaikana antsika hamakafaka lalina, hijery ambony, hijery ambany. Hitsipaka izay mihoapampana ary hifikitra amin’ny mari-pototra. Marihiko ihany koa fa efatokony ho tamin’ny herinandro no nivoahan’izy ity saingy noho ny fotoana tsy mifametra no nahatonga azy izao vao mety hivoaka.
Izay nahamarika no nahita fa tsy nisy nivoaka ny gazety malagasy tamin’ny asabotsy 29 marsa 2008 teo afa-tsy ny gazety Taratra sy ny Ngah zety ihany. Ny Ngah zety moa dia ho amin’ny fampihomehezana ka avelantsika any fa ny gazety Taratra no tiako homarihina. Izaho ve no diso tia mamaky gazety asabotsy ka nahatonga ahy hankasitraka anaty ny nivoahan’io gazety io tamin’ny 29 marsa 2008 natao ho andro tsy iasana nefa andraisan-karama (ho an’ny maro an’isa fa tsy natao ho ahy aloha)? Ny lohateny lehibe rahateo dia mikasika ihany ity datin’andro ity ihany: “Ny marina momba ny 1947: Lasa adihevitra goavana”. Faly aho tamin’ny nivoahan’io gazety io satria nisy hovakiana aho sady niompana tanteraka tamin’iny raharaha iny rahateo ny ankamaroan’ny takelaka tao anatiny. Manaraka izany dia hitako ihany koa fa vetivety ihany ny gazety dia lany teny amin’ny fivarotana azy. Midika izany fa liam-baovao ny olona, nefa etsy ankilan’izay dia azo heverina ve fa izahay nividy gazety tamin’io andro io dia tena tsy niraharaha ny andro na tsy niraharaha ny tantara nodiavin’ny firenena malagasy? Adihevitra atsangako sahady ny amin’iny aloha.
Faharoa manaraka izany, sady mifampitohy tamin’ny lohateny lehibe indrindra amin’ny gazety Taratra ihany, ny fiezahan’andian’olona hampiely ny hevitra tokony hanafoanana ny fankalazana ity 29 marsa ity. Io no tena raharaha satria karazany sambany raha olona “mpitaky ny fahaleovantena” no nihaviany. Olona iray no tena nihetsiketsika nitondra ity hevitra ity dia ny mpitarika ny Otrikafo Atoa Rajaonah Andrianjaka. Misy ihany koa anefa ireo mitovitovy hevitra aminy. Mampieritreritra sy mampitodika hijery indray ny fandehan’ny tantara. Tantara mbola mifamahofaho sy mifangaro tanteraka. Nisy ireo voakaraman’ny mpanjanatany hampisy ilay korontana, hamotehana tanteraka ny tolona tsy mitam-piadiana notarihin’ny MDRM. Nisy ihany koa ireo tsy nahandry ny lalana manara-dalàna nataon’ny antoko MDRM ary nivonona ny handray fiadiana noho ny likiliky tany anatiny tany. Voakendrin’ny voakarama ihany koa ireny indrindra fa ireo miaramila malagasy nalefa tany amin’ny ady lehibe faharoa tany Eoropa. Samy manana ny foto-pisainany ireo izay mety hifanohitra tanteraka aza na samy mihevitra ny tenany ho tia tanindrazana aza. Nefa mihevitra ny andaniny fa mpamadika ny ankilany.
Misy kosa olo-tokana izay noahiahian’ny mpitolona (mitam-piadiana sy tsy nanaiky hitam-piadiana) maro ho voakaraman’ny mpanjanatany dia Ravelonahina Edmond izany. Tsotra ny antony: Rangahy io no nahafantaran’ny mpanjanatany fa nisy izany fikambanana miafina VVS izany tamin’ny 1913. Nefa dia izy ihany koa no nampihorohoro ny tany amin’ny faritra sasany tany atsimo atsinanana fa tsy maintsy tanterahina ny fikomiana ny 29 marsa 1947 na ho inona na ho inona mitranga, ka izay tsy miady dia heverina ho mpamadika tsara vonoina. Nanery olona tamin’ny alalan’ny fanambanana basy mihitsy aza izy indraindray. Tsy ho afa-manameloka na oviana na oviana izay nandray fiadiana (lefona) tamin’izany fotoana izany anefa aho satria izay no noheveriny fa mety sy noheveriny fa baikon-dRaseta sy Ravoahangy ary Rabemananjara lohan’ny fitolomana. Raha raisina ohatra ny fitoloman’ny mainty tany Etazonia dia toy ny tolon’i Martin Luther King sy Malcom Little tsy nanaiky ny anarany ka nanova azy ho Malcom X izany. Ny vokatry ny tolona no ahafantarana izay nahombiazana kokoa na nandamoka tamin’ny tolony.